Haweenay gaarigeeda oo ay kaxaysatey xabsi loo dhigay (Warbixin xiiso leh + Sawiro) – SBC
Haweenay gaarigeeda oo ay kaxaysatey xabsi loo dhigay (Warbixin xiiso leh + Sawiro)
Dawlada Boqortooyada Sacuudiga Carabiya ayaa laga codsadey in ay sida ugu dhakhsiyaha badan u siidayso haweenay u dhalay wadankaasi oo ku xadgudubtey sharicga mamnuucista in haweenku gawaarida wadaan.
“Sacuudi Carebiya waa inay si dhakhso ah u sii daysaa haweenayda xiran ee lagu soo oogay in ay ku xadgubtey sharciga haweenka gawaarida u diidaya inay wadaan, isla markaana sharciga qudhiisa la la qaadaa” sidaasi waxaa lagu bilaabay warsaxaafadeed ka soo baxay hay’ada xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch.
“Boqor Cabdalla waa in uu si deg deg ah u amraa siideynta Manal al-Sharif oo la xiray ka dib markii ay iska indho tirtay xayiraada & mamnuucista saaran in haweenka gawaarida kaxeeyaan” ayaa lagu yiri bayaanka Human Rights Watch oo fadhigeedu yahay magaalada New Yok ee dalka Mareykanka.
Cilmibaaraha qaabilsan arimaha Bariga dhexe ee hay’adaha Human Rights Watch Mr Christoph Wilcke wuxuu ku sheegay in haweenay kaxaysatey gaariga qoyskooda ee la xiray ay tahay mid u keenaysa Sacuudi Carabiya dhaleeceyn, waxaana uu ugu baaqay boqor Cabdallaha Sacuudiga in uu laalayo sharcigaasi oo ah kan kaliya ee aduunka ka jira ee haweenka ka mamnuucaya in ay gawaarida kaxaystaan. Manal al-Sharif ayaa maalinimadii sabtida waxaa xabsiga u taxaabaxay ciidamada Booliiska ee gobolka ku yaal Bariga dalak Sacuudiga ee lagu magacaabo Al-Khobar, waxaana haweenaydan xabsiga la dhigay maalin uun ka dib markii ay filim ay iska duubtey iyadoo gaari kaxaynaysa ay soo galisey barta Internet-ka ee filimaanta lagu wadaago ee You Tube-ka.
Inkastoo gabadhan 32 sano jirka ah ee culuunta Cumpuyitarka ku takhukhstey ay siidaayeen ciidamada amaanka wadooyinka (traffic police) hadana waxaa goor dambe gurigeeda ka soo qadey oo xabsiga u taxaabay ciidamada Booliiska gaar ahaan kuwa dabagalka dambiyada, sida uu sheegay qareenka u doodaya gabadhan ee lagu magacaabo Cadnaan Al-Saalax.
Dhinaca kale koox Sacuudiyiin ah ayaa ka aasaasay bogga Internet-ka ee xiriirka dadweynaha ee loo yaqaan yaqaan Facebook, page gooni ah oo ku aadan u doodida in haweenku wadaan gawaarida.